လမ်းပြကြယ်: မင်းသား ဟယ်ရီရဲ့ အာဖဂန် အခြေဆိုက် စခန်း တာလီဘန်များ ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်နေ .
မင်းသား ဟယ်ရီရဲ့ အာဖဂန် အခြေဆိုက် စခန်း တာလီဘန်များ ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်နေ .
ဗြိတိန် တော်ဝင်မင်းသား ဟယ်ရီ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် အာဖဂန်နစ္စတန် စစ်မြေပြင်တနေရာကို တာလီဘန်တွေက လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။
အစ္စလာမ် စစ်သွေးကြွတွေအနေနဲ့ ဆက်တိုက်ဆိုသလို အမေရိကန်နဲ့ မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေ၊ သူတို့နဲ့ နီးစပ်တဲ့ အရာတွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို တိုက်ခိုက်မှုတွေ အရှိန်မြင့်လာတာတွေ့ရပါတယ်။
သတင်း လင်းသန့် 
Labels: ဓါတ်ပုံ ဗီဒီယို သတင်း Posted by Unknown